Igumbi lokuhlambela Rain Ukuhlamba, Accessories Ukuhlamba, Brass Faucet - Sinyu
technology Sinyu lizibophelele ukuvelisa ekupheleni ophezulu iimveliso xa zishishina zisithengisela sanitary ehlabathini.
Sinyu byi ingqalelo kuphuhliso ngeniso kwezoqoqosho kodwa ukhuselo lokusingqongileyo kuphela.
Kuyinto umnikezeli isisombululo ehlanganisiweyo R & D, uyilo, imveliso kunye neenkonzo zorhwebo.
Siye yazuza amalungelo abenzi ngaphezulu kwama-200, naye amanani iTeknoloji patents kwamamdla ngamazwe.
Sinyu iye kakuhle oxhobele iziko elebhu, nazo zonke iintlobo zovavanyo nocoselelo Equipments umlinganiselo leyo uvavanyo nje kuphela ukusebenza imveliso, umsebenzi kunye nobomi test, kodwa unako ngokuchanileyo hlalutya isisombululo electroplating webhate.
technology Sinyu lizibophelele ukuvelisa ekupheleni ophezulu iimveliso xa zishishina zisithengisela sanitary ehlabathini. Lo isisombululo ehlanganisiweyo ukunika of R & D, uyilo, imveliso kunye neenkonzo zorhwebo.
Silwenza uthotho imveliso kuquka ishawa ngesandla, headshower, bar sliding lomhlathi ishawa njalo, yaye ngokuthe ngcembe ikwanabela nakwezinye iimveliso ezinxulumene lokuhlambela. Sinyu likubona kubaluleke kakhulu kwimveliso kunye nenkqubo ezintsha, iye amalungelo awodwa omenzi wechiza ngaphezulu kwama-200, amalungelo awodwa omenzi wechiza 11 wayila ekhaya, amalungelo awodwa omenzi wechiza 6 wayila ngamazwe, yaye 11 PCT patents.
No. 7 XingJing Road, Zhangzhou Kazakh Investment Zone, Fujian, China